people Nepal » सिके राउतः ‘नासाका वैज्ञानिक’ वा ‘मूर्खताका डाक्टर’ ? ‘हतियार उठाएको छैन’ भन्दैमा नाङ्गै हिँड्न संविधानले दिन्छ ? सिके राउतः ‘नासाका वैज्ञानिक’ वा ‘मूर्खताका डाक्टर’ ? ‘हतियार उठाएको छैन’ भन्दैमा नाङ्गै हिँड्न संविधानले दिन्छ ? – people Nepal
शान्तिपूर्ण अभियान’ का नाममा नेपाल विखण्डनको बलात् कृत्य गर्दै आएका डा. सिके राउत पक्राउ पर्नासाथ केही ‘मुसा प्रवृत्ति’ का व्यक्तिहरुले सिके राउतको समर्थनमा सोसियल मिडियामा ‘स्याल हुइयाँ’ सुरु गरेका छन् ।
सिके राउतले शान्तिपूर्णरुपमै गतिविधि गरिरहेको र उनको यो गतिविधि ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ एवं ‘मानवअधिकार’ भित्रै पर्ने ती बुद्धिजीवीहरुको दाबी छ । अदालतले समेत सिके राउतलाई देश टुक्र्याउने अभियानका लागि ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको हुनाले उनलाई राज्यले पक्रन नमिल्ने राउतका उपवाचकीहरुको जिकिर छ ।
उपवाचकीहरुको अर्को जिकिर के पनि छ भने सिके राउत असाध्यै विद्वान हुन्, बेलायतमा पढेका डाक्टर हुन् र अमेरिकाको नासामा काम गरिसकेका वैज्ञानिकसमेत हुन् । उनको पहुँच संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत छ र उनी मधेसी जनताका मुक्तिदाता नै हुन् । उनको विद्वताका सामु अरु सबै मधेसी-पहाडी नेताहरु पुड्का छन् । यस्तै यस्तै स्याल हुइयाँ सुनिँदैछ, राउतका वाचकी र उपवाचकीहरुको ।
पहिले सुनौं नीलो स्यालको कथा
सिके राउतमाथि टिप्पणी गर्नुपूर्व नीलो स्यालको एउटा रोचक कथाबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
एकादेशको जंगलमा एउटा स्याल थियो । उक्त स्याल कुखुरा खोजी खान गाउँतिर पसेछ । एउटा घरमा रंग लगाउनका लागि ठूलो ड्रममा नीलो रंग घोलेर राखिएको रहेछ । त्यसमा चिहाएर हेर्ने क्रममा स्याल ड्रमभित्र डुबेछ ।
बाहिर निस्कँदा स्यालको खैरो स्वरुप पूरै नीलो भयो । आत्तिएको स्याल शिकार नखोजी बासस्थानतिर दौडियो ।
बाटोमा त्यो स्यालको जम्काभेट बाघसँग भयो । बाघले उसलाई झम्टनुको साटो अचम्म मान्दै सोध्यो- ‘तँ को होस् ? तँजस्तो नीलो जनावर त मैले अहिलेसम्म यो जंगलमा देखेकै थिइनँ ।’
छट्टु स्यालले मौकाको फाइदा उठाउँदैछ भन्यो- ‘म विशेष प्रजातिको बाघ हुँ । र, म अर्को जंगलबाट यहाँ पहिलोपटक आएको हुँ ।’
यति सुनेपछि बाघ तीन छक्क पर्‍यो । जंगलभरिका बाघहरुले भेला भएर नीलो स्याललाई आफ्नो पूर्खा ठानेर सम्मान गरे । ऊ बाघकै ओढारमा बास बस्न थाल्यो । र, शिकार पनि बाघले नै ल्याइदिन थाले ।
यत्तिकैमा एक दिन पल्लो खोल्सामा एउटा स्याल जोडले हाऊ हाऊ गर्दै करायो ।
स्यालको विशेषता के हुन्छ भने कुनै कुनामा एउटा स्याल कराएपछि त्यो आवाज सुन्ने सबै स्यालले पालैपालो कराउनैपर्छ । र, यसैलाई भनिन्छ-स्याल हुइयाँ ।
खोल्सामा स्याल कराएपछि नीलो स्यालले आफू नक्कली बाघ भएको बिर्सियो र उसले पनि ठूलो स्वर निकालेर हुइयाँ मच्चायो । छेउमा रहेका बाघहरुले बल्ल उसलाई चिने । र, उसलाई तत्कालै कारवाही गरे ।
राउतको गिरफ्तारीपछि नीलो स्याल चिन्न सजिलो
अहिले सिके राउत पक्राउ पर्दा नीलो स्यालको लोककथालाई चरितार्थ बनाउँदै केही मानिस र संस्थाहरु यसरी कराउन थालेका छन् कि यो देशमा विखण्डनलाई क-कसले धूप हाल्दैछन् भनेर पत्ता लगाउन अब सजिलो भइरहेको छ ।
मधेस वा मधेसी मोर्चामा मात्रै होइन, राजधानीमा बसेर पत्रकार, मानवअधिकार एवं अरु विभिन्न कभरमा सिके राउतलाई सहयोग गर्नेहरु कोको रहेछन् भनेर पहिचान गर्न अब सजिलो भएको छ ।
देशलाई धोका दिने यस्ता ‘नीला स्याल’हरु स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि छन् । दुई वर्ष पहिले सिके राउतलाई लण्डनबाट एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले ‘आस्थाको बन्दी’ बताएको थियो । नेपालबाट कृष्ण पहाडी लगायतले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै एम्नेष्टीसँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरिसकेका छन् । पहाडीले भनेका छन्- सिके राउतलाई आस्थाको बन्दी मान्न सकिँदैन ।
एम्नेष्टीले मात्रै होइन, नेपालको अदालतले समेत राउतको घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई बैधानिकता प्रदान गरिदिएका कारण उनी जेल जानबाट विगतमा जोगिएका छन् र बिखण्डनकारीहरु खुलेआम अदालतको दुहाइ दिँदै मातृभूमिविरुद्ध विखण्डनको अभियान चलाइरहेका छन् । अब दोस्रोपटक राउतको गिरफ्तारीले फेरि अदालतको पनि परीक्षण हुने मौका मिलेको छ । के अदालतले नै देश टुक्र्याउन पाइने नजिर बनाउला ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
सिके राउतले हतियार नउठाएको र शान्तिपूर्ण रुपमा सभा संगठनमार्फत गतिविधि गरिरहेको तर्क मुसा प्रवृत्तिका मानिसहरुले गरेका छन् । तर, के हतियार नबोक्दैमा जे पनि बोल्न र गर्न पाइन्छ त ?
नेपालमा रहेका युरोपेली संघका राजदूतहरुले बस नै रिजर्ब गरेर सिके राउतको दर्शनभेट गरेको समाचार विगतमा बाहिर आएकै थियो । अब राउतको गिरफ्तारीपछि पश्चिमाहरुको स्याल हुइयाँ सुनिन्छ कि सुनिँदैन, त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ ।
उता भारतले ज्वाला सिंह र गोइतलाई भारतमा आश्रय दिँदै आइरहेको छ । त्यही सशस्त्र समुहकै नारालाई मधेसमा गान्धीका नाममा प्रचार गरिरहेको सिके राउतको गिरफ्तारीपछि पनि अब भारतीय राजदूत रणजीत रायले ज्वाला सिंहहरुलाई भारतमा आश्रय दिइराख्छन् वा नेपाललाई सहयोग गर्छन् ? यो पनि सम्भवतः अब हेर्न पाइनेछ । सारांशमा भन्दा अब नीलो स्यालको स्वर छुट्याउन मज्जाले पाइनेछ ।
अब चर्चा गरौं, सिके राउतका खोटा विचारहरुको ।
राउतको ‘शान्तिपूर्ण’ पसल
सिके राउतले हतियार नउठाएको र शान्तिपूर्ण रुपमा सभा संगठनमार्फत गतिविधि गरिरहेको तर्क मुसा प्रवृत्तिका मानिसहरुले गरेका छन् । तर, के हतियार नबोक्दैमा जे पनि बोल्न र गर्न पाइन्छ त ? बोल्ने कुरामा देशभित्रको कुनै कानून र मर्यादा हुँदैन ? अवश्यै हुन्छ ।
जस्तो कि- तपाईले हतियार बोक्नुभएको छैन भन्दैमा बानेश्वर चोकमा नाङ्गै हिँड्न मिल्दैन । संविधानले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकार मज्जाले दिएको छ । तर, संविधानप्रदत्त अधिकार छ भन्दैमा तपाई गुप्ताङ्ग देखाएर हिँड्न थाल्नुभयो भने तपाईलाई प्रहरीले पक्रन्छ र सामाजिक मर्यादा खलल गरेको आरोपमा सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउँछ, थुन्छ । यहाँ संविधानले दिएको मौलिक अधिकार वा मानव अधिकारको तर्कले काम गर्दैन । ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ वा ‘शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाध हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता’ यसमा लागू हुँदैन ।
हिँड्ने विषयमा जस्तै बोल्ने विषयमा पनि यही नियम लागु हुन्छ । तपाईले ‘शान्तिपूर्ण ढंगले’ कुनै महिलालाई ‘वेश्या’ भन्नुभयो भने तपाईमाथि कारवाही हुन्छ । मैले ‘शान्तिपूर्ण रुपमा’ वेश्या भन्ने अभियान चलाएको हुँ भनेर तपाईले छुट पाउनुहुन्न ।
लोकतान्त्रिक देशको संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त दिएको हुन्छ, तर अरुलाई फिरिङ्गी भन्न पाइने, बेश्या भन्न पाइने, र…. इत्यादि भन्न पाइने अधिकार संसारमा कुनै संविधान वा कानूनले दिएको छैन, मंगल ग्रहको कानूनले त्यस्तो अधिकार दिएको छ भने उनै ‘नासामा काम गरेका वैज्ञानिक’ दाबी गर्ने डा. सिके राउतले जानून् ।
बहुजातीय बहुसांस्कृतिक देशमा एउटा समुदाय विशेषलाई फिरिङ्गी, बाहिरिया, इत्यादि भन्ने अधिकार कुनै पनि सभ्य समाजमा हुँदैन । देशमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा सामाजिक सदभाव बिथोल्ने वा छाडा एवं अपमानित कुरा बोल्ने छुट सिके राउत त के, सिके राउतका हजुरबालाई पनि छैन । केपी ओली वा अरु कसैलाई पनि यस्तो छुट दिइनु हुँदैन ।
माहात्मा गान्धी र ‘शान्ति’ को नाम लिएपछि जसका विरुद्ध जे पनि बोल्न र गर्न पाइन्छ भन्ने हो भने यस्तो विधिशास्त्रका आविश्कारक वैज्ञानिक सिके राउतलाई अन्तरराष्ट्रिय अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए हुन्छ । यस्तो विद्वानलाई अमेरिका र बेलायतले आफैंसँग नराखेर किन नेपालमा पठायो होला ? उनलाई ‘आस्थाको बन्दी’ भन्ने युरोपेली संघका राजदूतहरुले उनलाई किन युरोपका युनिभर्सिटीमा गेष्ट प्रोफेसर बनाउन नलगेका होलान् ?
यसको कारण यो हुनुपर्छ कि जातीय, साम्प्रदायिक एवं कुनै समुदायको विरुद्धमा घृणात्मक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने राउतको वौद्धिक स्तर सभ्य देशहरुले जाँचिसकेको हुनुपर्छ । अंग्रेजहरुलाई थाहा छ कि अंग्रेजी जान्दैमा विद्वान भइन्न । किनभने उनीहरुको देशमा अंग्रेजी जानेकाहरुले नै अपराध गर्छन् ।
हो, डा. सिके राउतले केही कितावहरु लेखेका छन् । मधेसको इतिहास लेखेका छन् मधेसमा भएको थिचोमिचोका बारेमा पनि लेखेका छन् । तर, उनले व्यक्त गरिरहेका विचार र उनको लाइन हेर्दाखेरि उनको डाक्टरीको विधा ‘मूर्खता’मा हो भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
मधेसलाई खस समुदायले उपनिवेश बनायो भन्ने राउतको निश्कर्ष सही छैन । विगतमा गोपाल बंश, लिच्छवि लगायत शासनकालमा मधेसले सिंगै नेपाललाई नेतृत्व गरेको हो ।
नेपालका पहाडेहरुका देवतासमेत मधेसी समुदायकै छन् । कृष्ण भगवानको तस्वीर पहाडेको घरघरमा छ । कृष्णजी यादव समुदायका हुन्, जो पहाडे समुदायमा पनि पूज्य छन् । सीता, रामचन्द्र, गौतम वुद्ध जस्ता पूजनीय व्यक्तित्वहरु पहाड-मधेस सबैका साझा हुन् । त्यसैले नेपालमा जनतामात्रै होइन, भगवान समेत पहाड र मधेसका साझा छन् ।
यो अवस्थामा राउतले जसरी मधेसलाई अलग्गै देश बनाउने भनेर अभियान चलाएका छन्, यो नेपाल र नेपालको हितमा छैन । मधेसी जनताको पनि हितमा छैन । यो उनको मूखर्तापूर्ण र अवैज्ञानिक अभियान हो । सिके राउत साच्चै वैज्ञानिक र विद्वान हुन्थे भने यो असम्भव मागका पछाडि युवाहरुलाई भड्काउनुको साटो वैज्ञानिक नीति अवलम्बन गर्न सक्थे । तर, उनी ‘मूर्खताको डाक्टर’ का रुपमा देखा परेका छन् ।
एकछिनलाई मानौं कि मधेस पहिले स्वतन्त्र थियो रे । समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा पहिले के थियो भनेरमात्रै हेर्नु मूर्खता हो । पहिले वाल्यकालमा हामी नाङ्गै थियौं, अब नाङ्गै हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने ? यो मिल्दैन ।
पहिले नेपालमा बाइसे चौबीसे राज्य थिए । पहिले सिक्किम बेग्लै देश थियो । पहिले भारतको भूमि अफगानिस्तानको सीमासम्म फैलिएको थियो । तिब्बत पहिले स्वतन्त्र थियो । बंगलादेश पाकिस्तानको भूमि थियो । भारत पहिले बेलायतको नियन्त्रणमा थियो । बेलायतले नियन्त्रण गर्नुपूर्व भारतमा करिब ५ सय वटा स्वतन्त्र राज्यहरु थिए । पहिले त के-के थियो, के-के थियो ।
तर, पहिले मधेसमा बेग्लै शासन थियो नै भने पनि अब हामीले नयाँ नेपाल, साझा नेपाल बनाउने कि विगतको मुरली बजाएर ‘सपेरा डान्स’ देखाउने ? अनि यस्तो पुारतन एवं अवैज्ञानिक सोचाइ बोक्ने मूर्खताका डाक्टरका पछि लागेर हामी कहाँ पुगौंला ? यो प्रश्नमा अब मधेसभित्र गम्भीर बहसको खाँचो छ ।
मधेसी मोर्चाका केही नेता कार्यकर्ताहरु र आफूलाई मधेसविद भन्ने केही मुसा प्रवृत्तिका विद्वानहरु समेत राजनीतिशास्त्र नै नबुझेका सिके राउतका पछाडि स्याल हुइयाँ मच्चाउँदै हिँडेका छन्, यो मधेसको हितमा छैन ।
डाक्टरले चिर्नमात्रै होइन, सिउन पनि जान्नुपर्छ
मधेसमा भइरहेको सामन्ती विभेद एवं असमानताको विरोधमा सिके राउतले जे जति चिरफार गरेका छन्, त्यसमा अलिकति पनि सत्यता छैन भन्ने होइन । मधेसमा विभेद छ । गरिवी, अशिक्षा र पछौटेपन छ । मधेसमा मात्रै होइन, देशैभरि यस्तै छ । हिजोको सामन्ती व्यवस्था र ०४६ साल यताका शासकहरुको गैरजिम्मेवार नीतिका कारणले यी समस्याहरु देखा परेका हुन् ।
तर, यी समस्याको समाधान सिके राउतले भने जसरी देश नै टुक्र्याएर सम्भव हुँदैन । आमाको औंलामा चोट लाग्यो भने उपचार गर्ने कि तिघ्रामै काटेर फालिदिने ?
त्यसैले सिके राउतले मधेसी समाजको चिरफारमा केही वस्तुगत आधार देखिए पनि त्यसको रिमेडी उनले नश्लवादी तरिकाले गर्न खोजेका छनु । राउत मध्ययुगीन समयका जातिवादी बनेर आएका छन् । यदि उनी समाजशास्त्र र राजनीतिमा सामान्य समझ भएका डाक्टर हुन्थे भने उनले चिर्न मात्रै होइन, अप्रेसनपछि सिउन पनि सिक्नुपर्दथ्यो । उनी काट्न जान्ने, सिन नजान्ने डाक्टर हुन् । दक्षिण एशियाको जियो पोलिटिक्समा मधेसमा बेग्लै देश बनाउँछु भन्नु भनेको फणीन्द्र नेपालले ‘ग्रेटर नेपाल बनाइन्छ’ भनेजस्तै श्वैर कल्पना हो । मधेसका जनतालाई दुई पुस्तासम्म सुख नदिने बाटो हो । यो कालीदासपथ हो । कालीदास पनि सिके राउतभन्दा कम विद्वान थिएनन् ।
‘पहाडिया नश्लवाद’ झनै खतरनाक
०५७ सालतिर यो पंक्तिकार नवदुलही श्रीमतीजीको नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम बिराटनगर पुगेको थियो । कार्यालयको झ्यालमा भीडामभीड थियो । एकजना मधेसी मूलका युवाले झ्यालको डण्डीबाट भित्र हात छिराएर नागरिकताको आवेदनमा औंठाछाप लगाए । भित्र बसेका कर्मचारीले हप्काउँदै भने- ‘ओई गधा, यहाँ हात छिराउने हो ? बाहिर गएर छाप लगाउन सक्दैनथिइस् ?’
कर्मचारीले सेवाग्राहीमाथि यस्तो अपशब्द प्रयोग गरेकोमा यो पंक्तिकारलाई असैह्य भयो । ‘सरकारी कार्यालयमा आएको वयस्क नागरिकलाई गधा भनेर हप्काउने ? तपाईहरुलाई यसो भनिएको भए तत्कालै गाली बेइज्यती मुद्दामा पक्रनुहुन्थ्यो’ यसो भनेर सार्वजनिकरुपमा प्रतिकार गरेपछि त्यहाँ होहल्ला मच्चियो । ती कर्मचारी भित्र छिरे । उनको नाम अहिले याद छैन, र उनी त्यसबेला खरदार तहका कर्मचारी हुनुपर्छ । प्रशासकीय अधिकृतले अगाडि आएर सरी भनेपछि समस्या समाधान भयो ।
एकपटक हामीले छातीमा हात राखेर सोचौं- के हामीले हृदयदेखि नै मधेसी समुदायलाई आफन्त ठान्न सक्छौं ? सक्दैनौं र अझै पनि बिराटनगरको खरदारले जसरी जातीय विभेदपूर्ण दृष्टिले नै हेर्छौं भने यो ‘पहाडे नश्लवाद’ सिके राउतको मधेसी नश्लवाद भन्दा बढ्ता खतरनाक छ
एकाध घण्टापछि नागरिकता बनाइसकेर बिराटनगरको महेन्द्र चोकमा एकजना एमालेनिकट व्यक्तिको भेटघाटका लागि हामी आयौं ।
अघि सेवाग्राहीलाई ‘गधा’ भन्ने कर्मचारी त्यहीँ आइसकेका रहेछन् । दोस्रो भेटमा उनले आफैं कुरा कोट्याए र भने- ए, भाइसँग फेरि भेट भयो, अघि तपाईले भनेको पनि ठीकै हो कि भाइ, तर मलाई मधिसे देखेपछि पारो तातिहाल्छ ।’
उनले यसो भनिसकेपछि फेरि त्यहीँ झगडा पर्‍यो । ‘तपाई सरकारी कर्मचारी भएर, सरकारको सिन्दुर लगाएर बसिसकेपछि यस्तो रंगभेद, जातीय विभेद गर्ने ?’
उनी त्यसबेला मौन त भए, तर आफ्नो कार्यकालमा कति मधेसी दाजुभाइमाथि यस्तै रंगभेदी व्यवहार गरे, यो पंक्तिकारलाई थाहा छैन । तर, अनुमानचाहिँ के लगाउन सकिन्छ भने उनी अहिलेसम्म पदमै छन् भने माथिल्लो तहमै पुगेका होलान् र त्यसबेला एमालेसँगैको संगत देखिएकाले उनी एमालेको निजामति कर्मचारी संगठनमा समेत होलान् । पदमा छैनन् भने उनी समाजमा मधेसी दाजुभाइमाथि घृणात्मक अभिव्यक्ति दिँदै चोकमा बसेर चिया पिउँदै होलान् ।
यो प्रशंग किन कोट्याइएको हो भने हिजो मधेसी समुदायमाथि वर्गीयमात्रै होइन, जातीय विभेद पनि भएकै हो । सरकारी निकायमा बसेका पहाडे मानसिकताबाट ग्रसित अधिकांश जातिवादी कर्मचारीहरुमा अहिले पनि यस्तो सामन्ती संस्कार हटेको छैन । अझ अहिले त त्यो हेजिमोनीलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । कतिपय नेताहरु समेत बिराटनगरका तिनै खरदारजस्ता देखिन थालेका छन् ।
धरान-बिराटनगरबाट ०५० सालतिर काठमाडौं आवत-जावत गर्दा रात्रीबस सप्तरी-सिरहा हुँदै आउँथ्यो । त्यहाँ गाडीभित्र सीटमा बसेको मधेसी समुदायको यात्रुलाई कन्डक्टरले हप्काउँदै मुडामा बसालेर पहाडेलाई सीटमा राखेको प्रशस्तै देखियो ।
यी सबै दृश्यहरु देख्दा यस्तो लाग्थ्यो, मधेसी जनता दुईवटा जाँतोमुनि थिचिएका छन्- एउटा सामन्ती व्यवस्थाको वर्गीय जाँतो र अर्को जातीय विभेदको जाँतो । मधेसी भएर जन्मिनु दुर्भाग्यजस्तै थियो उनीहरुका लागि ।
मधेसमा विभेद छ । तर, यो विभेदको समाधान सिके राउतले भनेजसरी देश टुक्राएर कदापि सम्भव छैन । हिजोको सामन्ती व्यवस्थाले गरेको भेदभाव र अपराधलाई अब लोकतन्त्र आएपछि समाधान गर्नुपर्छ । र, पहाडे-मधेसीवीच एकताभाव एवं आपसी विश्वास स्थापित गर्नुपर्छ, घृणाभाव होइन । सिके राउतले अहिले जे गरिरहेका छन्, त्यो आवेग केन्द्रित छ । शान्तिको कोरस गाउँदै मधेसलाई काश्मिरजस्तो बनाउने बाटोमा गएर समस्या समाधान सम्भव छैन ।
तर, यसका लागि हामी पहाडे समुदायका हौं भन्नेहरु नै बढी दोषी छौं । एकपटक हामीले छातीमा हात राखेर सोचौं- के हामीले हृदयदेखि नै मधेसी समुदायलाई आफन्त ठान्न सक्छौं ? सक्दैनौं र अझै पनि बिराटनगरको खरदारले जसरी जातीय विभेदपूर्ण दृष्टिले नै हेर्छौं भने यो ‘पहाडे नश्लवाद’ सिके राउतको मधेसी नश्लवाद भन्दा बढ्ता खतरनाक छ । राष्ट्रवादका नाममा मधेसी समुदायलाई भारतीय देख्ने सोचाइ सिके राउतहरु उत्पादन गर्ने कारखाना हुन् ।
अहिले विशेष गरी ‘एमाले स्कुल’बाट मधेसमा वर्गीय बाहेक अर्को कुनै समस्या नै नभएजसरी व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ, जसले मधेसको समस्यालाई नजरअञ्दाज गरेको छ । मधेसमा यस्तो दोहोरो विभेद नभएको भए मधेसी मोर्चा जन्मने नै थिएन । र, सिके राउतको व्यवसाय पनि फस्टाउने थिएन । विगतमा यही सम्भावनालाई बुझेर मदन भण्डारीले सीतानन्दन रायको नेतृत्वमा मधेसको समस्याबारे अध्ययन थालेका थिए, तर निश्कर्ष निकाल्नै नपाई दासढुंगा काण्ड भयो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका एमालेका नेताहरुले राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवहरुलाई गाली गर्ने तर, सिके राउतको विपक्षमा एक शब्द पनि नबोल्ने नीति लिँदै आइरहेका छन् ।
ओली सरकारका पालामा मोर्चाका नेतालाई खुइल्याउने र सिके राउतलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मधेसमा विखण्डनवादी अभियान चलाउन दिने नीति एमाले सरकारले लिएकै हो । एमालेको यस्तो नीतिले पनि मधेसमा विखण्डनवादलाई प्रश्रय दिएको छ । अब हुने एमालेको मधेस अभियानमा उसले सिके राउतका खोटा विचारहरुको कति खण्डन गर्छ, त्यो चाँहि हेर्न बाँकी छ ।
अन्त्यमा, मानवअधिकारको प्रश्न
जहाँसम्म सिके राउतसँग जोडेर मानवअधिकारको कुरो गरिँदैछ, उनले चलाएको अभियान र उनले व्यक्त गरिरहेको साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘जुरिस्डिक्सन’ भित्र पर्दैन । यसबारे माथि नै सप्रशंग व्याख्या गरिसकिएको छ ।
तर, कोही अपराधी नै किन नहोस्, उसलाई यातना नदिने, थुनामा परिवारजनलाई भेट्न दिने, प्रतिवादमा वकिल राख्न पाउने जस्ता कुराहरु मानवअधिकारभित्र पर्छन् । तर, राउत महान विचारक हुन् र उनलाई जे पनि बोल्दै नांगै हिँड्न कानूनले पूर्णतः छुट दिनुपर्छ भन्नुचाँहि मानव अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै हँसीमजाक उडाउनु हो । स्वतन्त्रताका नाममा नेपाल आमामाथि बलात्कार गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
हो, सिके राउतले मधेसको समस्याबारे बोल्न पाउँछन् । विभेदको विरोधमा अभियान पनि चलाउन पाउँछन् । तर, उनको मूर्खता नै कहाँनेर हो भने मधेसमा विभेद छ भन्दैमा देश विखण्डनको ‘शान्तिपूर्ण तयारी’ गर्ने अधिकार संविधान प्रदत्त हुन सक्दैन । यति कुरा राजनीतिशास्त्रको कखरा नबुझेका बरा डाक्टर सिके राउतको ‘वैज्ञानिक’ दिमागले किन सोच्न नसकेको होला ?
अरुण बरालको लेखवाट साभार गरिएको
एउटै बहस बापत सवा लाख लिएको कारण नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ विवादमा